रोमी र सविना को मामला मा रोमी नेइवबर्ग को शिकायत गरे: अझै पनि धेरै प्रश्नहरु! मार्टिन भिजल्याण्ड
मैले धेरै प्रतिक्रिया पाए मेरो लेख आइतवार 11 जून, जुन मैले पढेको एक योजनाकार विचार प्रकाशित गरे जसले मानसिकता हुन सक्छ कि रोमी Nieuwburg अवस्थित छैन (हेर्नुहोस यहाँ)। त्यहाँ मैले पाठकहरूका केही गुस्सा टिप्पणीहरू पाएको छु जसले यसलाई अनादर पाउन पाएको छ कि मैले त्यस्तो केहि प्रकाशित गर्न सक्छु। म पूर्णतया बुझ्छु, तर यी धेरै प्रोफाइलहरू पनि 'ट्रेलिंग' कोटीमा आइपुग्छन्; फौजेटिक्स जसले नकारात्मक नोट राख्ने प्रयास गर्दछ र उनीहरूलाई मेरो ठेगानामा अज्ञात अपमान र निन्दाको साथ फेंकन्छ। तथापि, त्यहाँ वास्तविक प्रोफाईलहरू पनि थिए र ती मानिसहरू रोमी जान थाले। ती मानिसहरु लाई प्राकृतिक रूप देखि नै सिद्धान्त को रूप मा भी ठोकर थिए। मैले पनि धेरै उपयोगी टिप्पणीहरू प्राप्त गरेको छु, उदाहरणका लागि, मलाई पाठकहरूले रोमीको इन्स्टाग्राम पृष्ठ र अन्य ठेगानाहरू जहाँ रोमीको सामग्री फेला परेन। रूपमा पहिले वर्णन आउँछ तपाईं त कठिन 5e बाँदर को प्रभाव आक्रमण किनभने यो, तपाईं झन् प्रहरी, न्याय को आधिकारिक संस्करण र मुख्यधारा मिडिया बारे आफ्नो शङ्का व्यक्त गर्न नेदरल्यान्ड मा कठिन बनाएको यो प्रयोग। तपाईं लगभग केला पकडने सीढी चढ्न हिम्मत नगर्ने, किनकि तपाईलाई सजाय दिइन्छ। यद्यपि, मलाई लाग्छ कि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एकदम राम्रो छ र त्यो विचार खुल्ला रूपमा आदानप्रदान हुनुपर्दछ; कि आलोचना सम्भव रहनु पर्छ र अधिकारीहरूको नियन्त्रण (अन्धा विश्वासको सट्टा) पनि एक राम्रो राम्रो हो।
एक पाठक को साजिश सिद्धान्त राख्ने जसले रोमीलाई सम्भवतः मेरो मा बनाएको अक्षर हो अघिल्लो लेख, परिवारलाई हानिकारक को रूप मा केहि द्वारा वर्णन गरिएको थियो। तथापि, मैले सोचे कि यो सिद्धान्त अध्ययनको लायक थियो र त्यसो गरे। यो जानकारीको साझेदारीले तपाईंलाई कहिलेकाहीँ अर्को तरिकामा ढिलो गर्दैन। यो प्राविधिक रूपमा अब अनावश्यक र असम्भव छ कि क्यारेक्टरहरूलाई lifelike प्रोफाइल प्रदान गर्न असम्भव छ, जीवनभर भिडियोहरू सहित। मा यो YouTube भिडियो व्याख्या कसरी सफ्टवेयर र कसरी प्रयोग गर्ने भनेर बताउँछ, उदाहरणका लागि, फिल्महरूमा मृत्यु भएको क्यारेक्टरहरू सफ्टवेयरसँग जीवनमा ल्याउन सकिन्छ। चलचित्र मा फास्ट र Furius 8 यो प्रविधि मृतक नेतृत्व अभिनेता पावलले वाकर को अनुहार (2 आफ्ना भाइहरूलाई) आफ्नो "शरीर डबल्स" मा राख्न उदाहरणका लागि प्रयोग गरिन्छ। यसैले यो रोमी को संभव गैर-अस्तित्व को सिद्धान्त को गंभीरता देखि जांच गर्न को लागी पागल नहीं लगयो। तर अधिक देखेर इमेजरी जो मान्छे उहाँलाई चिनेका साक्षीहरु संग संयोजन मा, यो साजिश सोचाले मलाई पठाउनाले पाठक स्पष्ट रूपमा बेपत्ता देखिन्छ जस्तो देखिन्छ। जब मैले आफैलाई2केटाहरूलाई बाटोमा डुब्न नजिकैको पुलमा भेटेको थिएँ जहाँ रोमी फेला पर्यो, अचानक प्रतिक्रियाले मलाई पुष्टि गर्यो। उनीहरूले मलाई चिनेनन् र असाध्यै र अनभिज्ञ रूपमा प्रतिक्रिया देखाए। उनी रोमीको अनुहार जान्दथे किनकि तिनीहरूले त्यो बाटोमा प्रति दिन 2x भेट्टाए। तल मेरो YouTube भिडियोमा उनीहरूको प्रतिक्रिया सुन्नुहोस्। साथै रोमीको बारेमा उपलब्ध रहेका धेरै छविहरू छिटो छिटो राख्न सक्दैन; सफ्टवेयर वा कुनै सफ्टवेयर छैन। त्यहाँ प्लानको अवस्थामा कुनै समय भएको थिएन।
मार्यो, रोमीकी आमाले सोमवार साँझ मलाई ईमेल पठाउनुभयो। अर्को बिहान मैले सोधें कि उनले साबित गर्न सक्थे कि इमेल ठेगाना उनको थियो; यो किनकि मैले धेरै ईमेलहरू प्राप्त गर्दछु जुन उत्तरसँग अवस्थित छैन। यो एक समस्या थिएन र उनले मलाई आफ्नो आइडी कार्डको प्रतिलिपि पठाए। मैले वर्णन गरे किन मैले लेख प्रकाशित गरें र म विशेष रूप देखि माना साजिश को उजागर गर्न चाहान्छ, तर यो पनि म बुझ्छ कि मान्छे यस्तो सोचेंगे कि यदि यति अनिश्चितता छ। मैले मेरियनलाई सोधें यदि उनले प्रमाणित गर्न सक्थे कि रोमी वास्तवमा उनको छोरी थियो। मैले त्यो प्रतिलिपि आईडी कार्डको रूपमा प्राप्त गरेको छु। मरीनले मलाई मात्र इमेल गरे कि उनी पनि उनको मालिक हुन् फेसबुक प्रोफाइल अहिले खोलिएको छ। मेरो खुसीतालाई अझ खुल्लाताले यस प्रकारको पहलमा ल्याएको छ र यसका साथमा 'रोमीको गैर अस्तित्व' को संसोधित साधन तत्वले सौभाग्य देखि पहिले नै पूर्णतया पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेको छ।
कल म अंतिम संस्कार प्रलोभन को एक झलक को लागी Hoevelaken मा गए र धेरै वास्तविक उदासी को देख्यो, तर पनि रहस्य को एक धेरै थियो। केन्द्रमा सबै पहुँच सडकहरू ब्लक गरिएका थिए र पर्यवेक्षकहरूले परिचित पुलिस-जस्तै संगठनहरूसँग सुरक्षित राखेका थिए। एक प्रेमी फोटोग्राफर यो क्यामेरासँग क्यामेराको साथ आउन प्रयास गरियो, तर यो रिपोर्टसँग रोकिएको थियो कि यो कडा रूपमा निषेध गरिएको थियो र कुनै भिजुअल सामग्री बनाइएन। के मैले फेला पारेको उल्लेखनीय कार गाडीको पछि लागी कार थियो, जसमा ताश राखिएको थियो, अन्धा थियो, त्यसो भए कुनै पनि परिवार दृश्यात्मक थिएन। यो सम्भव छ किनकि परिवार साँच्चै मिडियामा देखा पर्न र यो बुझ्न र सम्मान गर्न सकिन्छ। यो निश्चित रूप देखि उल्लेखनीय र विशेष थियो कि देखने को लागि रोमी लगभग एक शाही अंतिम संस्कार मिल्यो।
अब सम्म, मेरो लेख मुख्यतः रोमानी Nieuwburg मा केंद्रित छ, किनकी आसपास Savannah डेकर एक सानो धूम्रपान प्रर्दशन थियो। सबै पछि, उनको आमाले उनको लापताको समयमा प्रचारको खोजी गरे। यसले परिणामित स्थानीय बासिन्दाहरूको ठूलो खोजीमा नतिजा गर्यो। यो स्पष्ट छ कि हत्याको बारेमा धेरै प्रश्नहरू छन्। यो प्रहरी र न्यायिक अधिकार दुई हत्या अवस्थामा अस्तित्व विषयमा को मिडिया कथा धेरै समान छन् र एउटै क्षेत्रमा देखा परेको भन्ने downright अनौठो रहिरहन्छ, तर जो प्रत्येक अन्य indiscriminately अधिग्रहण संग गर्न केही छ। त्यो बस धेरै संग मामला छैन। महसुस गरेको कुरा केहि टोपी अन्तर्गत राखिएको छ धेरै मानिसहरूको साथ धेरै बलियो। त्यसपछि क्याप्प अन्तर्गत राखिएको छ र ज्ञान (या यसको कमी) संग एक महान रहस्य बनी रहेको छ। जस्तो देखिन्छ कि मिडियाले विचारलाई मानिसहरूलाई खारेज गर्न मिडिया प्रयोग गरिरहेको छ: 'बस पुलिस, न्यायपालिका र मिडियामाथि भरोसा राख्छ। यदि तिनीहरू केहि कुरा सत्य हो भने, तपाईंले यसलाई सत्यको रूपमा स्वीकार गर्नु पर्छ। "
Romy साँच्चै अवस्थित जो वर्तमान ज्ञान संग, एक काल्पनिक चरित्र को माथि उल्लिखित षड्यन्त्र Romy आविष्कार छैन जो एक संस्करणमा छाँटकाँट गर्न सक्छ, तर उदाहरणका लागि, केवल एक डबल अनुष्ठान हत्या भाग हुनेछ। रोमी को आमा, तथापि, स्पष्ट छ कि त्यो सोच्छ कि रोमी र सावनाह को हत्या एक दूसरे संग केहि गर्न को लागी छैन। म उसको इमेलबाट उद्धृत गर्दछु [उद्धरण] "रोमी र सावनाहसँग एकअर्कासँग केहि गर्न छैन। हामीसँग तथ्याङ्क र अपराधीको बारेमा सबै जानकारी छ। सम्भव छैन सम्भव छ।"हामी मान्न सक्छौं कि उनले यो ईमानदारीमा भन्छन्। तपाईं मात्र मान्न सक्दछ कि उनको आँखाले पुलिस र न्यायको विश्वसनीय कथाको साथ बन्द गर्यो। त्यो अवसर निश्चित रूपमा बहिष्कार गरिएको छैन। यद्यपि, म विश्वस्ततासाथ हत्याको कारणमा ईश्वरीय विश्वासमा विश्वास गर्दछु।
सबैजना मेरा हो फेसबुक पेज यसैले, देखाएको छ कि मेरो होईभेनगनमा मेरो भ्रमणको दौडान मैले रोमीको साइटमा जाने समस्या पनि गरे। यो किनकि म यो जान्न चाहन्छु कि यो स्थान 14 बाट एक केटाको लागि पुग्न गाह्रो छ, उदाहरणका लागि। म त्यहाँ हुँदा, दुई जना केटाकेटीहरू साइकल चलाउन आए। मैले सोधें कि यदि उनी पर्खिन चाहन्थे र मैले मेरो फोनमा आवाज रेकर्डर खोले। तिनीहरू रोमी जान्थे। मैले उनीहरूलाई बोल्दा र वास्तवमा थप प्रश्नहरू सोध्न चाहन्थे, एक रेंजर साईकल चलाउन आएको थियो, जसले केटाहरूलाई साइकल चलाउन त्यो बाटोमा घोडा लगाउन चाहन्थे। जाहिरामा कुनै चक्रवातले आधिकारिक रूपमा त्यो बाटोमा प्रवेश गर्न सक्दैन। मैले पनि त्यो प्रेमीबाट थप जानकारी प्राप्त गर्न खोजेँ। आफैलाई सुन्नुहोस्।
मेरो अन्तिम फेसबुक पोस्ट हिजो मैले संकेत ठाउँलाई र त्यो उनको, बाइक मा 2x एक दिन सामना गर्ने भनिन्छ बस थप प्रश्नहरू [उद्धृत] तथ्यलाई देखि Romy थाह गर्ने पन्ध्र वर्ष पुरानो केटाहरूसँग बैठक मेरो यात्रा : अहिले उठ्ने सबै भन्दा जटिल प्रश्नहरू छन्: "रोमीलाई भेट्न केटाकेटी किन 10 मिनेट देखेनन्? त्यो त्यहाँ कसरी पुग्यो? यदि रोमी यौन दुर्व्यवहार र हत्या गरिएको छ भने सबैले 10 मिनेटको समय सीमामा भएको हुनुपर्दछ। त्यो कसरी सम्भव छ? प्रहरीले वास्तवमा साक्षीहरू सुनेको थियो? म यो किन सुन्छु र प्रहरीले यी किसिमको गवाही प्राप्त गर्दैन वा तिनीहरूले यसको बारे केही कुरा गरे? " बरु रोमीले समयमै दुर्व्यवहार गरी हत्या गरेको बेला केटाकेटीलाई चकित गर्न सक्नु अघि। त्यसपछि सम्भवतः उनले देखेका थिएनन् वा केहि पनि सुनेनन् किनकी उनी वरिपरी वरिपरि केहि देखिनन्। यद्यपि यो उल्लेखनीय छ। वास्तविक समय फ्रेम भित्र रोमी प्रभावित भएको थियो2घण्टा बारेमा। यसैले हत्यारा हुनु पर्छ केहि समय थियो र जब तपाईं अग्निस्टर सुन्नुभयो, धेरै जवान मानिसहरू बाटोमा चक्र (तिनीहरूलाई जाँच गर्न प्रयास गर्दै)। मैले पानीको साथ त्यो बाटोमा भाग्यो कि पुल को अर्को पक्षमा एक hiker लाई पनि कुरा गरें। त्यो व्यक्ति पनि एक स्थान को ट्रेस नहीं देख्यो जहां रोमी मिलन सक्छ।
त्यसो भए मैले एकजना साथीलाई दस मिनेट अगाडि रोलिदिएँ र रोमी फेला परेन र केहि पनि देखिएन। वेबसाइटमा समाचार लेखमा stadnijkerk.nl मैले पढें कि बुबा को बाइक को खोज गर्न को लागी शुरू गर्न को लागी शुरु भएको थियो कि उनि कहाँ रहन र पुलिस को बयान मा ठोकर खाए। प्रश्न भनेको यो समय हो। त्यसैले त्यहाँ थुप्रै बच्चाहरू छन् जुन बाटो र रोमीको साइटमा आउँछन्। बर्नभेलसे बेकको एक केटा शुक्रवार दिउँसो परिवारको कुकुर छोड्यो। हाराबेक र ओसिन्जेरेवरब्रुगेटेजको साथमा बाटोको साथमा हिड्ने क्रममा उनले एउटा शरीर पत्ता लगाए। त्यहाँ दुई जना केटाकेटीहरू थिए जसले त्यहाँबाट पाँच जनाको लागि चकित भए र केहि कुरा बुझेनन्। त्यो उल्लेखनीय चीजहरू छन्। विशेष गरी रोमीलाई त्यो क्षणमा हराइरहेको थिएन र सावनाह पहिले नै थियो। साथै निम्न भिडियोमा टेलिग्राफको त्रुटि (ओम्रोप ब्र्याबन्टबाट) उल्लेखनीय छ। यद्यपि यो सम्पूर्ण कथा एक साजिशमा पट्टिनेछ। तपाई भर्खरै औंला पाउनुहुन्न। कसैलाई थाहा नभएसम्म रोमीले त्यस स्थानमा कसरी भेट्टाए? त्यस सानैना औद्योगिक भवनमा डचमा कसरी समाप्त भयो। यी दुइटा हत्याकालमा धेरै समान तत्वहरू छन्, कि यो दुई चीजहरूसँग एकअर्कासँग केही गर्न हुँदैन भन्ने स्वीकार गर्न लगभग असम्भव देखिन्छ र एक आवरण-अप परिदृश्य सिर्जना गरिएको छ। र जबसम्म कुनै जानकारी बाहिर आउँदैन, तपाईं अन्धकारमा रहनुहुन्छ। लेखकसँग कुनै निश्चित आयको रूपमा, तपाईसँग कुनै पनि तरिकाले अनुसन्धान गर्न को लागी कुनै तरिका छैन। तपाईंसँग फोन्नेसिक स्रोतहरू छैनन्। के हामी मुख्यधारा मीडिया को कहानी को लागि आफु को इस्तीफा ले रहनु पर्छ र उनको दलालों भन्दा गहिरो नहीं खोलते प्रेस एजेंसियों, संवाददाताहरु र क्यामेरा टीमहरु देखि रहन छ? यो भिडियो अन्तर्गत तपाईंले यस सर्वेक्षणमा सर्वेक्षणमा आफ्नो राय दिन सक्नुहुन्छ।
12 मा: 30 घण्टा आज मैले फेसबुक मार्फत एक निजी सन्देश पाएको छु। मैले त्यो फेसबुक प्रोफाईल राम्रोसँग जाँच गरेको छु र यस व्यक्तिका सबै परिवारका साथी र साथीहरू साँच्चै अवस्थित छन्। तथापि, मैले प्रतिक्रिया गुमाए। यसलाई आफैलाई पढ्नुहोस् र त्यसपछि निम्न सर्वेक्षणमा आफ्नो राय दिनुहोस्।
निम्न सर्वेक्षणमा रोमी नेइभबर्ग र सावनाह डकररको हत्याको घटनाबारे तपाईंको विचार दिनुहोस् र अनुवर्ती पछि यस लेखमा.
मार्टिन व्रिजल्याण्डबाट एक गैर लाभकारी आधार मा काम को समर्थन र यस साइट को एक सदस्य बन्यो, ताकि महत्वपूर्ण र खुला रिपोर्ट मुख्यधारा मीडिया देखि पूर्व chewed केक को अतिरिक्त रहन को लागि रहन को लागि:
स्रोत लिङ्क सूची: stadnijkerk.nl
सरकार र मीडिया साजिश सिद्धान्तहरूमाथि आक्रमण गर्दैछन्
साउजोर्ड फेनेमा द्वारा पूरा फ्लप द्वारा Eentandaag 'शिकायत या नहीं' श्रृंखला
ट्याग: अंतिम संस्कार, रेंजर, ग्लेन्ड, विशेष, साक्षीहरू, Hoevelaken, जेरोन, मैरियन, आमा, आमाबाबु, Romy, Romy Nieuwburg, स्थान
14 जून 2017 मा 12: 13
एक स्मारकसँग धेरै सावधान हुन सक्छ।
प्रत्येक ठाउँमा र सबैले सबैलाई दावी गरेको छ कि क्रोनकलमा कुना लरेन्ज्जीमा टेलरमा पुल नजिकको स्थानले तलका अखबार सन्देश सन्देश पनि हेर्न सक्छ।
तर काले स्क्रिन किन स्काइगगल्समा सिन्ट निकोलास सिरमा राखिएको स्मारक ठाउँको साथ तल रहेको अखबारबाट फोटो हेर्नुहोस्। केहि मीटरले परेन तर 120 मिटर र फरक फरक छान्नुहोस्।
स्मारक स्थानको सिन्टनोकोलास तल। स्थान धेरै फरक छ!
14 जून 2017 मा 12: 15
प्रहरी र न्यायपालिकाले टोपी अन्तर्गत केहि राख्नु पर्छ भन्ने तथ्य (व्यक्तिगत रूपमा मैले सोच्न सक्दछ कि यो राजनीतिमा सही मनसायमा चिन्ता छ जब उनीहरूलाई लुकेको छ भने), यो एक साजिश हुनेछ वा अब बहिष्कृत छैन। म व्यक्तिगत रूपमा यसलाई वैट्रारा जस्तो परिदृश्यमा राख्छु। डर छ कि हामी5वर्ष भित्र नीदरल्याण्डमा यो प्रकारको व्यवसायलाई सम्झौता गर्नेछौं। यस सन्दर्भमा, नीदरल्याण्डमा भविष्य बाट यो धेरै खराब देखिन्छ। को suspects हुनत साँचो दोषी (धेरै समाचार पत्र मा लेख को सामग्री दिइएको) यदि आफ्नै भर्ना अनुसार (आफ्नो हस्ताक्षरहरू उल्लेख बिना), विचार को लागि खाना दिनुहुन्छ, म डर।
14 जून 2017 मा 12: 34
मलाई आश्चर्य छ कि स्थान वास्तवमा स्थान हो भने, यो मलाई लाग््छ कि अपराध (र बलात्कार / दुर्व्यवहार र हत्या) दिनको लाइटमा भयो। यो सबै अस्पष्ट छ। रोमी को लास देखेको मानिस को हो? तर त्यो थाहा छैन कि उनी कहाँ फेला पर्यो ??? अथवा यो बोल्नुमा प्रतिबन्ध छ? अथवा के उसले एउटा ढाँचात्मक चरित्र हो जसलाई भनिन्छ जसको शरीरको झूट देखेको छ? के सोशल मिडियामा उहाँबाट केही कुरा सुनेको छ? के उनले केहि पनि रिहा गरे?
14 जून 2017 मा 14: 00
यो 16 संदिग्ध को विनाश र मानहानि को कहानी मकई को एक भाग हो, यो मान्य छ कि वास्तव मा युवा अपराधीहरु हो। संदिग्ध हुनुको अर्थ होइन कि तपाईं अपराधी हुनुहुन्छ। तपाईं पनि मीडिया मा संदिग्ध हुन सक्छ र शायद केटाहरु (स्वयं) द्वारा आफ्नो जूता मा राख्नु पर्छ कि सबूत पैदा।
14 जून 2017 मा 16: 31
किन एक 'pedo protector' आपराधिक कानून विशेषज्ञले आफ्नो जैकेटमा एकदमै सुनको रोटर (यस देशको लागि अन्धकारको सन्देश) लुगा लगाउँछन्? यो सधैं संधै ती गहिरो आविष्कारकहरु संग एक नै गाना छ कि उनि शैतानिक अपराध को सम्बन्ध मा एक दोश्रो को संकेत दिन्छन् र नीदरल्याण्ड मा शुरुवात संग त्यहि अपराधहरु र एक बड़े पैमाने मा अनुष्ठान को युग संग, राक्षसों को स्वागत demonie र त्यो हामी आउछन् र के गरौं। उनले भने कि उनीहरूले अपराधीलाई पक्राउ गरेका थिए। अब म बिस्तारै एक बलियो संदेह छ कि सरकार यसको नियन्त्रणमा छ।
14 जून 2017 मा 17: 10
सरकार निश्चित रूपमा यस कुराको बारे जान्न र थाहा हुनुपर्दछ (किनकि सबै लाइनहरू र तारहरू सँगसँगै आउँछन्)।
तर सरकारमा तपाईले साधारण परिषदको बारेमा सोच्नु हुँदैन, तर शाही परिवारमा उच्चतम क्षेत्रहरू, राजनीति, न्यायपालिका र प्रहरी वा सेनाको र त्यसमा पनि।
यसैले म अचम्म लाग्यो कि यो यति उदासीन छ। तिनीहरूसँग निश्चित रूपमा लाखौं बजेटहरू छन् वा सर्कल, "हामीलाई हामीलाई थाहा छ" - यति सानो छ कि कसैले केहि सरल zio / aivd एजेन्सीसँग सम्झौता गरेको छ?
निस्सन्देह @ मार्टिन पहिलो हत्या (र?) को समाधान गर्नु पर्दछ। सबै भन्दा पहिले, कसैले हत्या गरेको छ भने, अर्को प्रश्न WHO हो?
त्यसपछि DADERS को प्रश्न र किन, निरन्तरता वा उद्देश्यको निरन्तरतामा।
तथ्य यो हो कि (एक) सामान्य खुशी हत्या (हरू) लगभग निश्चित रूप देखि मामला छैन।
मलाई केहि हदसम्म ढीलो सिद्धान्त छ, सम्भवतः सम्भव छैन, तर म यसलाई सबै अचम्म, ईमानदार र सत्य-खोजी आत्माहरूसँग साझेदारी गर्न चाहन्छु।
युरोपमा तपाइँ आतंकवाद अभियानमा काम गर्दै हुनुहुन्छ। ग्लोएडएक्सएक्सएनएक्स (एक्सएनएनएक्सएक्स-त्यहाँ त्यहाँ तपाईले थाहा छ!)। नक्कली आक्रमण को हदसम्म वा पूर्ण निर्वाचकगण र केन्द्रीय अधिकार लागि पाकेको जनसंख्याको भयभीत गर्न निमित्त यो, प्रहरी राज्य, आदि पनि शरणार्थी को विशाल संख्या विरुद्ध युरोप को 'वर्तमान' जनसंख्या सिर्जना गर्न अभिप्रेरित हुन सक्छ, त्यो धेरै वर्ष को लागि बह रहेको छ र एक ठूलो भाग को लागि अरबी, इस्लामी मान्छे हो।
के यो ठूलो मात्रामा नक्कली आक्रमणहरूको लागि नीदरल्याण्ड धेरै सानो हुनेछ र त्यहाँ यहाँ, यदी विभिन्न धूर्त हत्याका साथ, जनसंख्या डर मोडमा राख्न प्रयास गर्दछ?
यसका विरुद्ध यो तथ्य हो कि यस अवस्थामा कुनै एसिलो चाहने / मुसलमानहरू संलग्न छन्।
केवल एक विचार हो। कसलाई थाहा छ वा शंका गर्दछ यो, म भन्न चाहन्छु
14 जून 2017 मा 17: 16
यद्यपि? काला कार र दाढ़ी संग पुरुषहरु, ???? ???? तपाईं कसरी जस्तै केहि साथ आउनुहुन्छ।
लाइनहरू / NLP subtleties बीच ठीक छाप / नोट गर्नुहोस्?
14 जून 2017 मा 19: 30
यो पनि "Nieuwburg" नाम - यदि वास्तवमा अवस्थित सबै सम्मानको साथ - मैले केहि 'सामान्य' खोज्छु, त्यसैले बोल्न: नयाँ-बर्गर। तर त्यो टाढा धेरै टाढा छ, जस्तै यो एक नयाँ पीडा थियो, जो वास्तवमा (प्रमाणित गर्न को लागी) जस्तो देखिन्छ।
14 जून 2017 मा 21: 21
@Notis केही टाढा जान्छ, तिनीहरू / कालो ग्यालरी धेरै रहस्यमा छन् जहाँ उनीहरूले मार्टिनको रूपमा फेरि देखाउँछन्।
यो तोडिएको र शब्दहरूको लागि पागल छ, मानिसहरूले ब्ल्याक मोल्डमा रोशनीहरू बहाएका छन् जुन यहाँ देखाइएको छ, तपाईं कसरी बच्चाको व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ कि सबै कुरा यति रहस्यमय हुनुपर्छ।
किन यो सबै रहस्य, यो अजीब छ कि मैले आज सुनेको छु कि मानिसहरूको समूह अचानक समूहमा रहेको समूहबाट अलग रह्यो र यसैले जुलुसमा सामेल भएन तर कब्रिस्तानमा बसेर ( मेरा एक मित्रले यसो भने: अनादर, म त्यो टाढा जान्छु र मलाई थाहा छैन के कारणहरू तर अजीब छ)
उनको अनुसार, वीआईपी फौजदारी बस पनि थिएन र उनी त्यहाँ सजिलै संग सामेल हुन सक्थे।
हालै मैले मेरो प्रिय चक्कुलाई दफन गरी आमाले स्पष्ट रूपमा मलाई मेरो भतीजाको भाइको तस्विरहरू लिने सोधे, उनले जिते जिते जितेकी थिइन किनकी यो उनको हेरचाह गर्ने व्यक्ति संग अन्तिम अन्तिम सभा थियो।
र तपाईं मान्छे मा क्रिस्चिंग बच्चाहरु को आफ्नो फेसबुक मा राखन योग्यता गर्न को लागी भरोसा गर्न सक्छन् (जो श्री Vrijland वास्तव मा गर्दैन)। नियमित समाचारहरू (UT समाचारहरू, AD आदि) थिच्नुहोस्, gedverdemme, bah!
तर यो पनि थाहा थियो कि कल लगभग एक क्यामेरा लिइयो र यसको साथ धम्की दिइयो, यो रहस्यको माथि रहेको छ र सबैले सबै ठाँउमा चलचित्र गर्दै छन्।
निस्सन्देह, आफ्नो परिवारको आदर गर्न चाहन्छ, तर सबै कुरा वा समाचार पत्र मा विशाल शीर्षकहरू यसलाई प्रकाशित र यति केहि जान्छ गर्छ र सकल गल्ती संदिग्ध बनाउने छ र यो मात्र यो धेरै मा अराजकता नेतृत्व छ भनेर तार्किक छ भने marcabre story।
आज सबकुछ 300meter को अंतिम संस्कारमा बदलिएको थियो (लिङ्क 1) र एक वृद्ध महिला हो जब उनी भर्खरै आफ्नो आभूषण (लिङ्क 2) लुटिएको थियो।
यो अजीब संसार हो
14 जून 2017 मा 21: 26
21.21 बाट मलाई भ्रम मा टिप्पणी देखि बचने को लागि
यो समूहले केटाको अनुसार विभाजित समूह कल थियो र आज होइन, म मजेदारहरूलाई जान्न चाहन्छु र आज म बोनसचेटनमा छैन।
15 जून 2017 मा 06: 46
नोटिस, र सबै, कुनैपनि अवस्थामा हामीले 911 सँग एक गल्ती नगर्ने सावधान रहनु पर्छ।
त्यसैले पहिलो प्रश्न हुनु हुँदैन "यो कस्तो भयो?" वा पनि संस्थापक "डब्लुएचओ यो गर्नुभयो?"
पहिलो प्रश्न हुनुपर्दछ: के भयो? (911 को बारे मा जवाफ, भवनहरू गिरावटको समयमा धूलमा गएका छन्, यसैले सम्बन्धित भू-विज्ञानहरू र एस-लहरहरू) बिना मात्र प्रश्न आउँछ यो हो भने, र अन्तमा डब्लुएचओ यो गरेको छ।
अन्यथा तपाई महत्वपूर्ण कदमहरू छोड्नुहोस्।
त्यसैले पहिलो प्रश्नको उत्तर, के भयो भने, हामी पहिले नै थाहा छैनौं। (हुनसक्छ केहि पनि छैन)
त्यसैले कुनै पनि पीडितहरू कसरी प्रमाणित गर्न सक्छन् - यदि तिनीहरू अवस्थित छन् - मारिएका छन्। चिसो, जहरीला, तिमाही, मृत्युलाई पिटेर, तपाइँ यसलाई नाम दिनुहोस्।
त्यसोभए WHO प्रश्न गरेको छ केवल पहिलो दुई प्रश्नको रूपमा चयन गर्न सकिन्छ
जवाफ दिइएको छ।
र त्यस प्रकाशमा यो उल्लेखनीय छ कि संदिग्धहरुलाई पक्राउ गरिएको थियो र पीडित पीडितहरुलाई बिना के भयो भनेर थाहा छ र पीडितहरुलाई मारिएको थियो।
सावनाहको बारेमा तुरुन्तै भनिएको थियो कि यो कुरा जटिल छ।
त्यसपछि उनी धेरै छिटो दबाइएका छन्। जर्ज मिशेल दफन गर्नुअघि एक वर्षको लागि कूलिंगमा थिए किनभने यो समस्या जटिल थियो।
15 जून 2017 मा 09: 28
यस अनुसन्धानको सन्दर्भमा तीनवटा प्रश्नहरू राम्ररी जवाफ दिनुपर्छ जुन अन्ततः अन्तिम प्रश्नको साथ तय गर्नुपर्छ (कारण (हरू) किन पछि)। यस शोधमा एउटा कोसिस गर्नु पर्छ विभिन्न परिदृश्यहरूमा।
http://www.begrafenisverzorgingvanasselt.nl/Condoleanceregister/savannah-dekker गहिरो कार्ड हेर्नुहोस् 'सभना हाम्रो घरमा छ, जहाँ हामी उनको परिवारको रूपमा अलविदा भन्छौं'
14 जून 2017 मा 23: 09
Svannah Dekker को बारे मा? के उनी साँच्चै अवस्थित थिए?
मैले उनको फेसबुक पेजमा केही तस्विरहरू देखेको छु र आँखामा रंगको तुलना गरे। त्यो रङ विचलित देखिन्छ। उनले 2015 मा फ्रिकल पनि गरे, तर तिनीहरू अचानक 2017 (चल्दो हुन सक्छ) मा गएका छन्। परिवर्तित आँखाको रंग उल्लेखनीय छ।
बुबाको फेसबुक टाइमलाइन पनि उल्लेखनीय छ। सावनाहको विफलताको समयमा उहाँले एक म्यानोल आवरण मा मासुको मासुको एक चलचित्र राख्नुभयो। तल टिप्पणीहरू धेरै आश्चर्यजनक छ। जस्तो कि मानिस आफ्नो छोरीको लापताको बारेमा चिन्ता थिएन।
के यी एउटै केटी हो?
फोटो दायाँ 31 जुलाई 2015 http://www.martinvrijland.nl/wp-content/uploads/2017/06/Savannah-Dekker-31-juli-2015.png
फोटो 2017 जून छोडियो https://images1.persgroep.net/rcs/OYaqOfnm_lsPJgdnDaGYiGGEJtw/diocontent/107076941/_fitwidth/694/?appId=21791a8992982cd8da851550a453bd7f&quality=0.9
14 जून 2017 मा 23: 13
के त्यो बुबा वास्तवमा अवस्थित छ? अर्को अस्पष्ट प्रोफाईल र बुबाले सनना को गायब को बारे मा एक मैनहोल को कवर मा मासु को बारे मा अर्को फिल्म राखयो। अजीब अवस्थामा। भिडियो हेर्नुहोस्:
14 जून 2017 मा 23: 54
किन न त केटीहरू आमाबाबु दुवै परिवारका तस्बिरहरू हेर्छन्?
15 जून 2017 मा 02: 55
यसले म्यानोल आवरणमा मासुको मासुको काम गर्दछ !! फेसबुक डेककर, यो सब सिरका स्पिनरहरूले के सोच्ने कुरामा यो भिडियो साझेदारी गर्नुभएकोमा धन्यवाद।
15 जून 2017 मा 11: 12
एक मैनहोल कवर मा Grilling मासु ??? !!!!
निश्चित रूपमा अनप्लिकेसन, अनैतिक (जनावरको आदर) र वास्तवमा केवल निरन्तर।
यो NOW जस्तै केहि गरिरहेको छ? हो, राम्रो मजाक, ठीक छ? NO, SO!
Ps शायद यो मानव शरीर थियो।
ओ हो, हामीले अझै पनि यसको गम्भीर खाता लिनुपर्छ: "मेडिलीन म्याक क्यान" परिदृश्य
म त्यो बेल्जियमको अन्तिम विश्वास गर्दिन, त्यो एक (सुपर) धनी अफ्रिकी अज्ञातमा ल्याइएको थियो। सायद एक व्याकुल वा गलत तरिकाले बारसोसो संस्करणलाई तिरस्कार गर्न।
यद्यपि, कि (धेरै) बच्चाहरू अपहरण गरिएका छन् र धनी pedophiles मा बेचेका छन्, साँच्चै, सबै युरोपेली र शाही घरहरूको उच्च क्षेत्रमा!
हेनरी र प्रिंस बर्नहेर्डलाई निजी घरको तुलना गर्नुहोस्।
15 जून 2017 मा 15: 42
नोटिस, मलाई अल्टिनिनबामर्टन थाहा थिएन, त्यसैले मैले डुबाइदिएँ किनभने म मेलेलेन म्याक्यानलाई मृत गर्दछु।
मैले अल्क्विनको केहि अन्य चीजहरू देखेको छु।
उहाँले आफैले एक माध्यमलाई बोलाउनुहुन्छ र हामीलाई विदेशी प्रकटीकरण र नेस्टा सासेज राख्छ। सीधा भयानक putlucht बेन्जामिन Fulford र आफ्नो सेतो ड्रैगन समाज, "पनि आदेश जो व्यापार गर्न अनुमति दिन्छ" त्यसैले म संयोजन बेन्जामिन Fulford पायो / alcuinbramerton gegoocheld.Toen अचानक बाहिर एक खरायो को शरीर थियो, जबकि म त गंध टोपी।
माफ गर्नुहोस् मानिस, म तपाईंलाई निराश पार्न चाहँदैन, र म पनि नीसेरा मन पर्छु, तर म परेका कथाहरूमा विश्वास गर्दैन।
वैसे, यदि अक्किन वास्तव मा एक माध्यम थियो भने, उनलाई ठेगाना थियो कि मड्यूल उस अपार्टमेंट मा मृत्यु भएको छ जहां त्यो सोया र अपहरण गरिएको थियो।
यहाँ केहि ब्राइट मेडिलेन को लापता को बारे मा जानकारी, 2,3 र4भागहरु लाई पनि हेर्नुहोस।
Madeleine - किन ढाँचा माथि,2माथि6भागहरू पनि हेर्नुहोस्
Mc Cann को एंबेडेड कन्फेशन्स,2र3भागहरु लाई पनि हेर्नुहोस
15 जून 2017 मा 22: 27
@salm म अपार्टमेंट मा म 'मरेको' सोच्दैन।
होइन, त्यो धेरै र धेरै बढी MacCain को मामला मा रहेको थियो / लगभग थियो केहि निश्चित छ।
त्यो केटीले वास्तवमा विभिन्न र धेरै उद्देश्यका लागि यौन वस्तुको रूपमा सेवा गरेको छ, म भन्नेछु।
दिइएका लिंक दिइएका सबै प्रकारका छलफलहरूको मात्र एक उदाहरण थियो, तर त्यहाँ धेरै लिङ्कहरू छन् जुन योमा जान्छ, र मैले (अब र) फेला पार्न सक्दिन।
gr।, एन। ????
16 जून 2017 मा 06: 22
नोटिस, ठीक छ के तपाईं चाहानुहुन्छ।
त्यसैले तपाईं सबूतको बावजुद मेडिलेन अपार्टमेन्टमा मरेको थियो (खोजी कुञ्जी सहित जुन स्पष्ट रूपमा संकेत गरिएको छ कि उनी कहाँ मरेका थिए) अझै पनि विश्वस्त भएन। म ईमानदारी देखि परवाह छैन कि तपाईं विश्वास गर्न चाहते हो।
सच्चा खोज पाठकहरूको ध्यान आकर्षित गर्न सँधै माथिको लिङ्क राख्नुभयो मैले सिद्ध ईमानदार, स्वतन्त्र सत्य खोजीकर्ताहरूको गहिरो अन्वेषण गर्न।
15 जून 2017 मा 06: 19
शब्दहरूको लागि अनुपयुक्त, विफलताको दिनमा अझै पनि, पूर्णतया छक्क पर्दैन, यो लगभग अविश्वसनीय छ। धेरै टिप्पणीहरू पनि पढ्न र अधिक प्रतिक्रियाहरू बुझ्न योग्य छन्। कसले जस्तै केहि गरिरहेको छ? जस्तै त्यहाँ जडित गर्न केहि छ। त्यो सम्पूर्ण 'अपरेसन' गोप्य छ, जहाँसम्म मेरो चिन्तित कार्य हो, म यो मेरो पहिलो प्रतिक्रिया थियो जब मैले मीडिया को माध्यम ले कथा को पुरा तरिकाले कवर गरे। एक कुरा निश्चित छ कि केटीहरू अब त्यहाँ छैनन्, रोमीमा मलाई पनि विचार छ कि दुवै स्थान सही छैन र स्थान अपराध कहीं र हुनु पर्छ। जो पासर्जी को छ जो कुमारी को 'लाश' को हेरचाह मा देख्यो?
15 जून 2017 मा 09: 32
कृपया मलाई मेरो विचार बोल्नको लागि क्षमा गर्नुहोस्, तर कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ कि यस अवस्थामा रोमी र सभाना मूर्ख भइरहेको छ। के भयो भने त्यहाँ कुनै मृत केटीहरू थिएनन्? मजाकहरू गोपनीयतामा घोरिएका थिए र क्यामेराहरू लामो दूरीमा राखिएका थिए। पिता डेकरले सावनाहको विफलताको दिन अर्को मैनहोल-मासु-ग्रिल चलचित्र राखे।
यो farfetched एक यस्तो चकमा व्यवस्था गर्न संकेत र पाठ्यक्रम सुदूर-टाढा-GIE छेद मा बालिका अर्को पहिचान अन्तर्गत जारी सुनिश्चित गर्नुपर्छ लिन्छ लाग्न सक्छ ... तर म आफ्नो आमाबाबु बाबु आमा को विश्वस्त छैन। यस्तो चकलेट निर्माणकर्ता द्वारा गलत आईडी कार्ड गरिएको थियो। रोमी को आमा मलाई उनको आफ्नै कार्ड कार्ड र रोमी को। त्यो त्यो दिन र अंतिम संस्कार पछि दिन किन गर्नेछ? उनले मलाई किन जवाफ दिन सक्थे?
मैले पनि अभियोगको नाम पाएको छु। म त्यसो त केहि केहि नै पत्ता लगाउन सक्दिन, र यदि मैले केहि सुनेको छैन, मलाई अब केहि सुन्न छैन।
सम्भावित लक्ष्य (प्रतिक्रिया):
तिनीहरूले किन त्यसो गर्नु पर्छ / केहि गर्न चाहानुहुन्छ? जनसंख्याको ठूलो सामाजिक प्रभाव र अधिक नियन्त्रणको साथ ठूलो लक्ष्य प्राप्त गर्न, निककोला मञ्चेलेलीको किताब 'इन्ट प्रिन्सेप' ले तपाईंलाई मानिसहरूलाई दुर्व्यवहार र छलको साथमा पक्राउ दिन्छ। अनि त्यस Machiavelli मा नेदरल्यान्डमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण मिडिया पुरस्कार छ। एक पल्ट बेक वैटरले त्यो पुरस्कार जिते।
15 जून 2017 मा 12: 06
के यो चयन गरिएको छ / चयन गरिएको छ? जस्तै (जल) भेटी र कुलीन को कोर्ट मा सेवा गर्न अन्य, वा तिनीहरूको नेटवर्क को एक (कहीं विदेश र नयाँ पहिचान संग र नयाँ शुरुवात) र एक सेक्स दासको रूपमा दुरुपयोग गर्न र जो प्रयोग गरे? के उनीहरूको 'जैविक' आमाबाबु थियो? युवाहरु लाई हेरचाह गर्ने युवाहरु संग युवा गाउँमा।
15 जून 2017 मा 12: 32
@Martin यो मलाई सबै स्पष्ट तथ्याङ्क दिइएको सबै भन्दा स्पष्ट परिदृश्य हुन लाग्दछ।
(कारण ग्रिल को तिथि 31 1 मई र जुन हराइरहेको छ र म माथि कतै हेर्न? अथवा यो जुन द्वारा 1of2राखिएको छ?)
तर राम्रो अनुहार पुस्तक साँच्चै तयारी गर्दै।
14 म पनि नेदरल्यान्ड आक्रमण वा तिनीहरूले समस्या एउटा अत्यन्तै संसाधन अन्य साधन फेला औसत Neander देश एह खेद Dutchman त्यो पनि सानो हुन सक्छ भने जो: समस्या-प्रतिक्रिया-समाधान मेरो प्रतिक्रिया 2017 मा 17 10 जुन हेर्नुहोस्। र लोप, बलात्कार र हत्या र पछि leftist "gutmensch" प्रतिक्रिया आम क्रमशः दुःखमा प्रदर्शन को व्यक्तिगत अवस्थामा यो देशमा के गर्न धेरै राम्रो। त्यहाँ प्रत्येक लाश Neanderlander पहिला खुल्ला आँखहरु संग बायाँवाद 'gutmensch' को रूपमा उल्लेख गरिएको छ!
स्वादिष्ट लडाइहरु र लडकियों: राम्रो शोक, ठूलो फूलहरु, भालू (पाडो को लागि), हग्स, कार्ड, बच्चाहरु को चित्रहरु र धेरै अन्य frills।
छोटो समयमा: नेदरल्यान्ड्स रुउट !!
सोही, एक त वास्तविक अवस्थामा2सुन्दर चरा भन्दा एक पत्थर recoils: र शोक-भावनाहरु-मद्दत nogmeerpolitieencontrolea.ub मोडमा नेदरल्यान्ड्स र केही उच्च pedoos अन्तिम शिकार शिकार प्रदर्शन।
सामान्य प्रस्तुतिकरण एक ला वैट्रा संधै प्रदूषण र अन्य विभाजन (न्यायिक शक्ति, पुलिस, सेना, आदि) मा धेरै उच्च नाप को "teambuilding" को लागि राम्रो छ।
अन्तमा, तपाईंले उच्च क्षेत्रहरूमा भर्नु अघि केहि चीज गर्नु पर्छ। त्यो पहिले देखि नै सिसिली मा डगरेटा (माफिया) संग मामला थियो र अझै पनि दुनिया मा सबै विद्युत ब्लक (सरकारहरु पढें) संग छ।
15 जून 2017 मा 18: 50
यो देखि देख्न सकिन्छ कि त्यो बेवास्ता 'उपन्यास' संकेतहरू प्रचार गर्दछ।
16 जून 2017 मा 18: 09
@Alert, मलाई बुझिएन। म brainwashed breezer फूहड़ रोशनी को प्रतीक पूजा को देखते हो, तर रोशनी वा Savannah संग यो रोशनी भिडियो को के गर्दछ?
र कसले छ?
15 जून 2017 मा 13: 26
एनएलपी समाचार कवरेजले मीडियामा बढ्दै गएको छ, खासकर जब मैले Bertelsmann एजी (RTL) साइट हेर्छु। तिनीहरूले एडवर्ड बरेन, निकोलोग मञ्चेलेल र जोसेफ गोबिल्सले धेरै राम्रो पुस्तकहरू पढेका छन्। सबै कुरा पाठकलाई सल्लाहकारी राज्य (सम्मोहन) मा प्राप्त गर्न र त्यसपछि राज्य-निर्देशित प्रचार संग विषय भरिएको छ। उदाहरण:
एजेंट नीके नासिम (3) मा मारेको पहिलो व्यक्ति थिए: 'मैले आफ्नो पेटमा एक बैंड प्रिन्ट देखाएँ'
ब्यान्डन्डरहरू फिलिममा जंगली
चाँडै सडक आकस्मिक सेवाहरू र नासिम परिवारसँग भरी छ, जुन स्थितिबाट स्पष्ट रूपमा धोका दिएका थिए। "मेरो पछि मैले धेरै चिन्ता र चिन्ता सुनाएँ। यो बच्चाको आमा बन्न सक्यो। यो चिल्ला हड्डीमा गएर "निकिले सम्झन्छन्।
त्यसबाहेक, धेरै अगस्टस्ट्यान्डरहरू भेला भएका थिए, कसैलाई पनि मोबाइल फोनमा फाईलियो। "मलाई जंगली लाग्यो"। "मलाई भनिएको छ कि यो एक बच्चा थियो र यो एक आकर्षण थिएन, कि तिनीहरूले गल्ती गरे। मलाई लाग्थ्यो मेरो अनुहार एक चिसो थियो, किनभने यो तुरुन्तै पछ्याइएको थियो। "
अन्य शब्दहरुमा, राज्य को धोखाधनी फिलिम नहीं गरिन सक्छ। लन्डनको उल्लेख गर्ने छैन जहाँ ब्रेक्सिट राज्य राज्यको आतङ्कको लागि जनसंख्यालाई सजाय दिइन्छ।
आतंकवाद = "सरकार द्वारा डरलाग्दो"
15 जून 2017 मा 15: 58
"बर्नभेलिस बेकका एक केटाले शुक्रवार दिउँसो परिवारको कुकुर छोडे। हाराबेक र ओसिन्जेरेवरब्रुगेटेजको साथमा बाटोको साथमा हिड्ने क्रममा उनले एउटा शरीर पत्ता लगाए। (प्रहरी गर्न रिपोर्ट लगभग तुरुन्त ठूलो मात्रा कार्य सुरु ल्याए।) (केश Brook मिलती जहाँ Barneveld Beek साइट वरिपरि क्षेत्र, प्रहरी द्वारा छानबिन लागि बन्द भएको थियो।) एजेन्ट, गुप्तचरहरू र थियो चाहन्थे प्रहरी कुकुर। आइतवारसम्म आइपुग्दा ट्रेस अन्वेषण जारी राख्यो। बर्नवेलसेक बेक को साथ बाटो एक मार्ग हो जुन धेरै विद्यार्थीहरु द्वारा चक्र गरिएको छ। "
प्रहरी मानिन्छ एक पाठ्यक्रम उहाँले शरीर देखेका थिए र भनेर बाहिर जाने वा चाहनुहुन्छ हिम्मत छैन जहाँ उहाँले सम्झना छैन भनेर हैरान छ जो एक जवान (काल्पनिक चरित्र ??) को 'सन्देश' निम्न पछि छानबिन लागि र्याप क्षेत्र बन्द राखे। रोमीले क्यान्सरको लागि कहाँ राख्यो?
एक गलत ट्रयाक सेटअप गर्न को लागी पुलिस सक्रिय रूप देखि शामिल छ। चालक र सह-चालकले यस अवधिमा कस्तो भूमिका खेल्छ? अब बेनामी कार सावनको (स्थान) मा हेर्नुहोस्। यस अवस्थामा, पुलिस बहिष्कार गर्दैन कि यसले धेरै संदिग्धहरू समावेश गर्नेछ।
15 जून 2017 मा 18: 18
एक बुबाको रूपमा, म विचार गर्दैछु भन्ने सोही संस्थाहरू जुन 'माथि हेर्न' गरिन्छ हामीले हाम्रो समाजमा धेरै आवरण-अपहरू र कानुनी त्रुटहरूका लागि जिम्मेवार छौं। त्यसैले हामीले रूटमा समस्या समाधान गर्नैपर्छ:
बाल संरक्षणको परिषद्, युवा हेरविचार, ओएम छोटो न्यायमा हाम्रो देशमा समस्या छ।
झाडी इन संगठनहरू र सबै क्यान्सर तत्वहरू हटाइनु पर्छ। मिनिराका रूपमा गोप्य समाजहरूको सदस्यता पनि दंडनीय हुनुपर्छ। किनभने हामी वास्तवमा एक खुला र नि: शुल्क समाजमा बाँच्यौं भने, सरकारको बारेमा गोप्य कार्यहरू / प्रक्रियाहरू रद्द गर्न सकिन्छ। यो ठीक छ जस्तै जॉन एफ। केनेडीले यो राखे:
"धेरै शब्द 'गोपनीयता' एक मुक्त र खुला समाजमा घृणाजनक छ; र हामी स्वाभाविक र ऐतिहासिक रूपमा गोप्य समाजहरूको विरोध, गोप्य शपथहरू र गुप्त कार्यवाही गर्न मानिसहरूको रूपमा हो। "
एक राम्रो उदाहरण सार्वजनिक अभियोग सेवा हो, जुन अब लीड / मिनर्वा जडान भएको पीजीजी छ।
Leiden = Minerva = VVD = रयल परिवार, प्रिय मान्छे यो एक उच्च गणित होइन कि हामी मनोवैथ्स को एक सड़ा र भ्रष्ट वर्ग द्वारा शासित हो।
15 जून 2017 मा 18: 20
र यो पहिले नै भनिएको छ ... "चुप लाग्ने हो भने,"
15 जून 2017 मा 20: 03
"यो भिडियोको साथ आपूर्ति गरिरहेको बेला भान रोसीमको लागि अझै पर्याप्त थिएन। जब उनी यस्तो फिल्ममा गोली हानिए तापनि उपस्थित हुन सक्दछन्। सेक्स स्टोर मालिकले उनको अनुरोध अज्ञात आपूर्तिकर्तालाई यस अनुरोधको साथ बुझेका थिए र Rossem बाट सूचित गरे जुन केहि व्यवस्थित हुन सक्छ। तर पहिला तिनले आफ्नो व्यक्तिगत जानकारी दिनैपर्छ। भिडियो हेर्ने दुई दिन पछि, रोसममलाई संगठनको प्रतिनिधिले भनिन्छ जुन यो स्नफन फिल्महरू बनाइयो, र त्यही बेलुका बेलुका (नेदरल्याण्ड) मा BREDA (क्यानाडा) मा क्याफेमा निमन्त्रणा गरिएको थियो। जब वान रोसमेम आइपुग्यो, एक राम्रो लुगा लगाएको व्यक्ति वा 30 वर्षको उमेरले उनीहरुसँग सम्पर्क गरे। यो व्यक्ति रोसमम लाई सूचित गर्दछ कि उसलाई एक व्यक्ति को लागी "उहाँलाई मदत गर्न सक्छ" को लागी थियो। भ्यान रुसीमलाई अर्को क्याफेमा ल्याइयो, जहाँ सानो कान्छो, तर समान रूपमा राम्रोसँग लुगा लगाइएका व्यक्तिको प्रतीक्षा गर्दै। यो व्यक्तिले उसलाई सूचित गरेको छ कि उसले आफ्नो व्यक्तिगत र वित्तीय जानकारी देखेको छ र यो संतोषजनक थियो। अर्को दुई दिनको बारेमा दुई वा तीन छोटो कुराकानीमा एक सम्झौता गरिएको थियो जसमा रोसमेमले अज्ञात स्थानमा नियुक्त गरिनेछ जुन उनीहरूले मनपराउनुभएका केटीलाई बलात्कार र हत्या गर्न सक्थे। यसले उसलाई 75,000 यूरो खर्च गर्नेछ; 45,000 यदि उसले हेर्न मात्र खोज्थ्यो।
निस्सन्देह, रोसममबाट अन्तिम क्षणमा ब्याक भयो, घटनाको आयोजकलाई इम्प्रेसले छोडेर उनीहरूलाई लुट्न डराए। Rossem देखि अर्को एक मा गए, तर उनले आफ्नो सबै प्रमाण र ब्रेडा को उत्साह को मेलबक्स मा अतिरिक्त जानकारी जमा गरेको थियो। वान रोसममले पर्खाइरहेको छ र निम्न हप्तामा पर्खाइरहेको छ, सम्पर्क गर्न को लागी वा कम से कम केहि कागज पढ्न को लागी अनुवर्ती जांच को बारे मा। केही भयो र केहि पनि रिपोर्ट गरिएको थिएन।
15 जून 2017 मा 20: 05
यसले संकेत गर्दछ कि धेरै गम्भीर यौन सम्बन्धहरूमा प्रमाणको बोझको साथ केहि पनि छैन। एक्लो गरौं जब उच्च श्रेणीका व्यक्तिहरू संलग्न हुन्छन्।
16 जून 2017 मा 06: 37
Inviolability को प्रभाव को उद्देश्य के विपरीत हो। यो सही तरिकाले दुरुपयोगको बारेमा नकारात्मक रिपोर्टहरूको नेतृत्व गर्दछ। जहाँ राज्य लगभग सधैं सम्भव दुर्व्यवहार (प्रकरण Demmink) मा अनुसन्धान भ्रामक, अक्सर ठीकै कभर-अप, ठीक किनभने प्रतिरक्षा यस व्यापक परिभाषा को सुझाव।
भन्न को लागी एनएल धेरै शताब्दी को लागि अपहरण गरिएको छ र एक आपराधिक गिरोह द्वारा कब्जा मा लिया गएको छ। राजाको वास्तवमा शाही रगतको सेवकहरूले नियुक्त गर्न कसरी सक्दैनन्? यो बेवास्ता छ। मैले यो नीदरल्याण्डमा भइरहेको छैन कि नागरिहरुलाई विनाशकारी अभ्यासहरू रोक्न र कब्जा गर्ने शक्ति हटाउन खडा हुनेछैन। एक सानो अल्पसंख्यक एक क्रांति हटाउन प्रयास गर्नेछ, तर सफलताको कुनै मौका छैन। कुलीन अभिजात वर्ग जुन हरेक कानून भन्दा माथि छन्, म डराउँछु, एनएलमा घन्टी छैन र युरोपमा मूल नागरिक (दास) नम्बरहरूको लागि।
26 अगस्ट 2017 मा 00: 18
कुनै पनि अवस्थामा, यो उल्लेखनीय छ कि कसरी युवाहरू सतावटहरू छन्। त्यो अविश्वसनीय छ, जब सम्म केहि अजीब थियो।
यो निश्चित छ कि रिश्तेदारहरूले उनीहरूको आराम पाउँदछन्, र गोपनीयतालाई थाहा छ।
उदाहरणका लागि, नयाँ सही तथ्याङ्कहरू मेरो दोहोर्याउन रोक्न महत्त्वपूर्ण देखिन्छ।
र त्यो काम छ। केहि चीजहरू गर्नका लागि त्यहाँ पर्याप्त कर पैसा पनि छ।
डे क्रोनेकल्स एम्स्टर्डम मा पनि छ। यो कहाँ छ साइमोन कार्मिगल्टल्ट को छवि हो। यो युद्ध स्मारकबाट टाढा छैन। परिस्थिति कहिलेकाहीँ केहि चीज चाहिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ पनि गम्भीर डिग्री पनि हुन्छ।
यो कचरा डिब्बा मलाई लाग््छ यो ठाँउ उपयुक्त छैन। अनि त्यसपछि कहिलेकाहीं धेरै प्रदूषित हुन्छ।
यस्ता चित्रहरू एक प्रकारको थर्मामीटर हो जसले नीदरल्याण्ड रोगीको अवस्थालाई संकेत गर्दछ।
निश्चित रूपमा स्थानको कारण (?) स्किग्गलहरू फेरि फेरि त्यस्ता सुन्दर र राम्रा केटीहरूको जीवनको लागि एक सुसमाचार हो।
यद्यपि स्थिति धेरै सुन्दर छ, यो अझै पनि नागरिक कर्तव्य हो! र क्रम मा सबै राख्नुहोस् र राख्नुहोस्!
व्यवहार वातावरण द्वारा धेरै दृढ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र हामी यसको साथमा छैनौं।
« रोमी नेइवबर्ग को थिए र रोमी र सावनाह को हत्या को बीच सम्बन्ध के हो?
यी रोमी नेइभबर्ग र सावन्नाह डकररको मुद्दामा संदिग्धहरूको नाम हो? »
कुल भ्रमण: 15.949.495
विश्लेषण गर्नुहोस् op आजका युवाहरू पुनः-शिक्षा शिविरहरू (ग्लागहरू) जलवायु नकार्न भर्न चाहन्छन्
SalmonInClick op आजका युवाहरू पुनः-शिक्षा शिविरहरू (ग्लागहरू) जलवायु नकार्न भर्न चाहन्छन्
SalmonInClick op चीनबाट कोरोनाभाइरस विश्वव्यापी खोप दायित्व को लागी उत्तम alibi प्रदान गर्दछ
मार्टिन भिजल्याण्ड op इरल्याण्ड ऑस्कर गल्जाार्ड को हो र इयुजेनिक्ससँग उसले के गर्नुपर्दछ?